The itinyekwu Hacks Live Omume - Foneelu Of The Day
Kere ike kacha ike nchikota nke ihe ọmụma ị ga-enwe ike ịhụ na a otu ụlọ.
Nke ahụ bụ ihe ị na-mgbe ị na-aga na itinyekwu Hacks Live mbono.
Na timespan of 3 ụbọchị, 17 nke kasị mara iru na foneelu azụmahịa nnọkọ na 3,000 nwoke na ndị inyom na-achọ inwere ịmụta ha ahịa na nzuzo.
The omume 2018 bụ a ngụkọta ndekọ emebi na erechapụla ọmụmụ na a okwu nke sekọnd.
Ọ nke 52,000 ifịk foneelu ọrụ zuru ụwa ọnụ, dị nnọọ a obere nta wee eri na ezi ọkachamara.
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka a na-, na-akpachapụkwa anya maka afọ ọzọ omume.
Ọ na-ama a na-mara ọkwa!